Taariikhda My Butros » Hayso burburin ah? Halkan Sidee in ay ogaadaan
Last updated: May. 19 2020 | 2 min akhri
Waxaan ka dhan waxa ay la kulmeen, balambaalis ee caloosha marka aad isaga ama iyada arki ka dhanka qolka; neefta oo neefta marka aad cadaydo ee la soo dhaafay aad burburin ama taagan dhow isaga ama iyada in wiishka; heerka wadnaha kordheen markii gacmaha aad caatada ah uu midba midka kale ku jireysa saalada filimka. Kuwani waa calaamadaha dhan in aad ku dhacaan qof. Iyada oo la qirayo Arrintaasna waa u Fududahay, laakiin daynin qof dareenkaaga ogayn wax badan ka adag yahay. Halkan waxaa ku qoran dhowr siyaabood oo ay u dirayeen in aad ka sareso aad yeelanaysid dareenkooda ka baxsan saaxiibtinimada iyo si aad u ogaato haddii ay isku dareento.
Qaabka ugu Honest
Habka ugu sahlan waa in ay neef badan ku qaadato oo ka daadan digir ah in ay isaga ama iyada si toos ah. Just qabtay wakhti halkaas oo aad ka sareso ka heli kartaa oo keliya oo isaga ama iyada dareen run ah aad u sheegto oo weydii haddii ay isku dareento. Waxaad la u dhan dhiganaysaan ka soo on line iyo suurto gal samaysiga kor u diidey degdeg ah, laakiin waa sida ugu dhaqsaha badan si aad u hesho dhammaan off xabadkaaga. Habkani qaadataa xaddiga badan ee isku kalsoonaanta, Si kastaba ha ahaatee. Haddii aadan is-kalsooni geesi-, laga yaabee in hab khiyaano noqon lahaa ugu wanaagsan.
Kordhinta Factor rumowday ah
Hab wanaagsan A si ay u dareemaan ka saaray suurtagalnimada of saaxiib la noqdo in ka badan saaxiib waa in ay si tartiib ah u noqdaan flirtier la shayga aad Jacayl. Qosleysa badan oo, samaynta badan oo xiriirka indhaha, wink uu marmar iyo degdeg ah, Ragooda gaarka ah marka ay goob bulsho oo ku siin kara in aad ka sareso calaamadaha ugu khiyaano in aad iyaga siineyso dareenka badan yihiin kuwa kale. Haddii aad lacag bixisid si aad u burburin ka badan dadka kale fiiro gaar ah u muujinaysaa burburin in aad qabto dareen gaar ah isaga ama iyada.
Hel More Physical
Qaado fursad kasta oo aad awoodo gaadhitaan iyo taaban aad ka sareso. Ha, Waxaan donít macnaheedu soo duulay ay boos oo ay ku raaxo. Fursado Simple qaato in uu taabto ay gacanta ama gacanta sida aad ka qayb qaataan wada hadalka. Sii burburin hab marka isnabadgelyaynay ama midba midka kale Salaan. Iyaga oo kalgacal leh hab flirty markii iyaga la amnigiisa tiirsadee in ku dhow markii ay kuu sheegaya sheeko ama qarsoodi ah. Kordhinta xiriir jireed waa hab wanaagsan oo ay hoos u tilmaamo in aad jeclaan lahayd in ay u dhow isaga ama iyada, labada xiriirka caqliga leh, iyo jidh.
Noqo farobadan Iyadoo Amaanta Your
Bilow ammaanayaa aad burburin markii ay soo xiiro ama xirtaan dhisan fiican. Taasi waxay ka dhigi doonaa oo keliya ma aad burburin dareento in aad fiican oo naftiisa ku saabsan, laakiin sidoo kale ha doonaa inay ogaadaan aad u malaynayso in ay tahay soo jiidasho. Comments Samaynta sida ìyou leeyihiin sida dareen weyn ee humorî marka burburin kaftan ka dhigeysaa ama ìyou si smartî waa markii ay kala hadlayaan arrin muhiim ah waa hab wanaagsan oo ha burburin ognahay run ahaantii aad sidooda oo kale.
Farsamadaan No waa foolproof, oo weli ka soo xiri karaa in aad guri sheegista aad burburin dareenkaaga haddii ay donít hesho guud-mar ah, laakiin waxay kaa caawin kara in aad hesho dareen wanaagsan oo sida burburin dareensan adiga kugu saabsan. Iyadoo mid ka mid ah xeeladaha, waxaa muhiim ah in la akhriyo jawaabaha crushís aad. Haddii ay ka jawaabaan comments ama falalka ay qaadan yaxyaxin ama ka xumaaday, waxaa jira fursad ay donít isla adiga kugu saabsan dareento. Haddii ay ka jawaabaan shukaansi la shukaansi more, waa calaamad fiican ay burburiyo aad ku aad u.